သူမကို TV Channel တစ်ခုမှာ နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ပရိတ်သတ်ကြီးအားပြောပြလာတဲ့ ယဉ်လတ် - UniqueZone Info
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မ
ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်နော်။
သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ်ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့နော်။”
မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့သူမက ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ခံစားနေရသမျှကို သူမရဲ့ ချစ်သူကို ရင်ဖွင့်နေရတယ်ဆိုပြီးရေးတင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမ က ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ပျောက်နေပြီး Tiktok မှာပဲ ပျော်ပါးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှတော့ ယဉ်လတ်က” သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် MWD Channel မှာသတင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ရိုက်ကူးရေး ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတွဲပြီး တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. .. သူမ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးအောက်မှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတစ်ချို့နဲ့အတူ တစ်ချို့ကတော့‌ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကိုလည်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ယဉ်လတ်အတွက် အားပေးစကားလေး တစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာနဲ့နေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်နော်။
သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ်ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့နော်။”
ဒီနေ့မှတော့ ယဉ်လတ်က” သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် MWD Channel မှာသတင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ရိုက်ကူးရေး ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတွဲပြီး တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. .. သူမ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးအောက်မှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတစ်ချို့နဲ့အတူ တစ်ချို့ကတော့‌ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကိုလည်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ယဉ်လတ်အတွက် အားပေးစကားလေး တစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…
ဆရာတော် တစ်ပါးရဲ့ အိမ်ခြေ (၆၀၀)စာ အလှူလေးမှာ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး လုပ်အားပေး ပါဝင်ကာ ကုသိုလ် ယူခဲ့တဲ့ လင်းအောင်ခေတ်
ချွေးနည်းစာဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ရောင်းချဖို့ ပြင်နေတဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်